Covid-19 Youraya Mutongi weDare rePamusoro neVamwe Vakuru Vakuru
Bazi rezvehutano rinoti vanhu makumi maviri nevana vakashaya nechirwere cheCovid-19 munyika nemusi weSvondo zvasiya huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika hwave chiuru chimwe chete nemazana maviri ane gumi nevanomwe kana kuti 1, 217 kusanganisira vamwe vane mukurumbira munyika.
Vamwe vevaziviswa kuti vashaya nekuda kwechirwere cheCovid 19 mutongi Justice Clement Phiri, mutungamiriri weConsumer Council of Zimbabwe, Amai Rosemary Siyachitema uyewo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezveminda vakambomirira Mbare mudare reparamende VaTendai Savanhu.
Mumashoko ekuchema VaPhiri, mukuru wevatongi munyika, VaLuke Malaba vati vakashaikira kuMarondera uye vakeenderera mberi vachiti nyika yarasikirwa nemunhu aiziva nyaya dzemitemo zvakanyanya.
Amai Siyachitema avo vange variwo nhengo yeBoard reZimpapers vanzi vakashaya nemusi weMuvhuro nekudawo kwechirwere cheCovid-19. Amai Siyachitema vakatanga kutungamirira CCZ mugore ra2004.
VaSavanhu vanonziwo vakashaya nezuro nedenda reCovid 19. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health, VaItai Rusike vatiwo kufa kwevanhu vanozivikanwa munyika mucherechedzo wekuti chirwere cheCovid-19 chiriko huye hachisaruri.
VaRusike vatiwo ndufu dziri kuitika chidzidzo kuti nyika ikoshese nyaya dzezvehutano.
Mumiriri weMbare mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance VaStarman Chamisa vatiwo vanorangarira vaSavanhu nemabasa ekusimudzira musha weMbare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhama dzevashaya ava.
Tichiri panyaya iyi, vanhu zana negumi nevashanu kana kuti 115 vakabatwa nechirwere checovid-19 nemusi weSvondo. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararia vave zviuru makumi matatu nematatu ane mazana matatu nemakumi masere nevasere kana kuti 33, 388.
Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi zviuru makumi maviri nematanhatu ane makumi manomwe nevanomwe kana kuti 26,044. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 683. Vanhu vachiri kurwara zviuru zvitanhatu nezana nemakumi maviri nevanomwe.